डाइभिङ भनेको के हो ? - Sainokhabar
होमपेज / खेलकुद / डाइभिङ भनेको के हो ?
डाइभिङ भनेको के हो ?
सोमबार, बैशाख २९, २०७७ , फिपराज बेघा लिम्बू
√पवन तेयुङ लिम्बू
मलाई लाग्छ कि कोरोना भाइरस फिक्सेबल छैन । यो “चीज” अनिश्चित रुपमा फैलिने भाइरस हो । त्यसैले सावधानीहरू छन् जुन हामी महामारिलाई रोक्न सक्छौं । तर मेरो सुझाव यो छ कि हामी आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्छौँ । मैले किन डाइभिङ(जलयात्रा) लाई रोजेको हो भने वास्तविक कडा प्रमाण छ कि डाइभिङले हाम्रो दैनिक प्रणाली वृद्धि हुन्छ र विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको तथ्य हाे । हामी जो जहाँ छौ आफ्नो तरिकाले Adventure (साहसिक कार्य) गर्न सक्छौँ । यदि यसो गरेको खण्डमा सजिलै कोरोना भाइरसले हाम्रो कोषलाई अक्रमण गर्न सक्दैन ।
सान्यतया पानीमा छलाङ मार्नुलाई डाइभ भनिन्छ । डाइभिङ भनेको पानीभित्र डाइभ गर्ने एक माध्यम हो जहाँ गोताखोरले पानी रभित्र पूर्णतया स्वतन्त्र रूपमा श्वास प्रश्वास लिन सक्दछ ।
डाइभिङ को महत्व :
समुन्द्री भागहरू धेरैले अन्वेषण गर्न सक्दैनन् । समुद्रले पृथ्वीको सतहको ७१ % प्रतिशत ओगटेको छ। यदि तपाईको लक्ष्य समुन्द्री संसार हेर्नु र खोज गर्न छ भने तपाईले स्कूबा डाइभ सिक्न आवश्यक छ । जमिन सतहमा जस्तै समुन्द्री परिसर प्राकृतिक विम्बले हराभरा रहन्छ । रबगैँचाझैँ कुदिएका चट्टान । प्राकृतिक रङीचङी समुन्द्री जीव र समुन्द्री वनस्पति मुख्य आकर्षण हुन् ।
मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक विम्बहरू समुन्द्री सतहमा विलीन भएका छन् । ती विम्बहरूलाई आजको युगमा ज्ञानको लागि खोज गर्न नितान्त आवश्यक ठान्दछु । जस्तै:- हामिलाई थाहा छ विश्व युद्द मा प्रयोग गरिएका विभिन्न साधनहरू समुन्द्रिरी सतहमा खसालिएको कुराहरू, टाइटानिक जहाजको भयानक दुर्घटना साथै समुन्द्री सतहको प्रति दिन आयतन बढ्नुले प्राकृतिक विम्बहरू समुन्द्री सतहमा परिणत हुनु । यी सम्बन्धलाई खोज गर्न सक्ने माध्यम मात्र डाइभिङ हो ।
डाइभिङलाई व्यायाम रको रूपमा पनि लिन सकिन्छ किनकि डाइभिङ रले मानव शरीरलाई चालको अवस्थामा राख्दछ जबकि लगातारको डाइभिङले मानव कोषहरूलाई मजबुत बनाउँदछ ।
साहसिक यात्रा :
मानव प्रजाति सतहमा रहेर श्वासप्रश्वास लिने प्रजाति हो । जबकि पानीमुनि पनि विभिन्न अड्चनका साथ सतहमा जस्तै श्वासप्रश्वास गरी यात्रा गर्न कमजोर मुटुलाई पक्कै यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले आजको युगमा साहसिक यात्राका लागि डाइभिङ उपयुक्त ठान्दछु ।
समुन्द्री जीवको अवस्था अन्वेषण :
जमिनमा भन्दा समुन्द्री दुनियाँमा जीवको सङ्ख्या धेरै रहेको विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा हो । पक्कै पनि समुन्द्री सतहको यात्रा तय नभएसम्म ती जीव र तिनको वासस्थानको अवस्था अन्वेषण सम्भव छैन ।
सामान्यतया डाइभिङ गर्न वञ्चित यो अवस्थामा गरिन्छ ।
हालसालै शल्यक्रिया भएमा
शरीरका कुनै पनि अङ्ग घाइते रहेमा
कुलतको अत्यधिक लत रहेमा
तेह्रथुमको सोल्मा अहिले माल्दिभ्स
( पूर्व राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी लेखकले ज्ञान यात्राको अभियानमा सो लेख लेखेका हुन् । ज्ञान यात्राको प्रवर्दक अमित थेबेका अनुसार ज्ञान यात्रा एक व्यक्ति, एक दिन र एक ज्ञान उपर केन्द्रित हुनेछ । जीवनमा जुनसुकै विधा र क्षेत्रमा सामान्यदेखि विशिष्ट ज्ञान राखेकाहरूले अरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् । थाहा नपाएकाहरू र थाहा पाएकाहरूबीच ज्ञान, अनुभव, सीप र सूचनाको आदानप्रदान हुनेछ । अभियानअन्तर्गत यहाँहरूले संक्षिप्त पोस्ट, तस्वीर र भिडियो क्लिप्समार्फत् आफ्ना कुरा राख्न सक्नु हुनेछ । यस अभियानमा जोडिन हुन सबैलाई आह्वान छ । कवि, कलाकार, सिनेकर्मी, खेलाडी, प्रशासक, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, गृहिणी या जोसुकै पनि यस ज्ञान यात्रामा सामेल हुन सक्नेछन् ।